I-China Cross-flow Circuit Closed Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers Umkhiqizi nomhlinzeki | Yubing
Isiphambano Sokuvalwa Kwesifunda Esivaliwe Sokupholisa Imibhoshongo / Amapholishi Okujikeleza Okuvaliwe Wesifunda
Njengombhoshongo wokupholisa wokugeleza kokuhwamuka owenziwe ngohlobo lokuphambuka, umfutho wombhoshongo (amanzi, uwoyela noma i-propylene glycol) usetshenziselwa ukunikeza ukupholisa okuvalelwe kwekhoyili futhi okungadalulwa ngqo emoyeni. Ikhoyili isebenza ukwehlukanisa uketshezi lwenqubo emoyeni wangaphandle, ukuyigcina ihlanzekile futhi ingcolise mahhala ku-loop evaliwe. Ngaphandle kwekhoyili, kukhona ukufafaza kwamanzi phezu kwekhoyili futhi kuhlangana nomoya wangaphandle ukukhipha umoya ofudumele kusuka embhoshongweni wokupholisa uye emkhathini njengengxenye yamanzi ihwamuka. Amanzi abandayo ngaphandle kwekhoyili asatshalaliswa kabusha futhi asetshenziswe kabusha: amanzi apholile abuyela emuva ekuqaleni kwenqubo ukumunca ukushisa okwengeziwe ngenkathi kuhwamuka. Kuyasiza ukugcina inqubo ehlanzekile ye-fluid ezokwehlisa izindleko zokugcinwa nokusebenza.
Izici zemibhoshongo yokupholisa ukujikeleza kwesifunda evaliwe:
Isakhiwo sokuklanywa kwesintu esinomnyango wokungena osayizi omkhulu (okhiyekayo) nesikhala sangaphakathi esanele, abasebenzi bezokulungisa bangangena kalula ngaphakathi kombhoshongo ukuze kuhlolwe futhi kulondolozwe nsuku zonke noma ngabe imishini isebenza noma iyavalwa.
Ngenxa yomoya opholile owomile nokugeleza kwamanzi okugeleza ngendlela ehambisanayo, ingaphezulu leshubhu linciphiswe ngokuphelele ngamanzi okufafaza ukugwema noma iyiphi indawo eyomile ezoholela esikalini sediphozi. Futhi izinga lokushisa lamanzi okufafaza liphansi kunezinga lokulinganisa elinciphisa kakhulu ukukala.
Ukusebenza Okuhle Kokushisa Okushisayo
Ama-coolers we-loop avaliwe ahamba phambili asebenzisa ubuchwepheshe obuyinhlanganisela bamakhoyili nokufaka ukwenqatshwa kokushisa okwenze ngcono indawo yokudlulisa ukushisa ukwenza ngcono ukusebenza kahle kohlelo.
ICE evaporative cross-flow closed circuit coolers 'structure and key components isingeniso:
Ngenxa yokugeleza komoya namanzi ngendlela ehambisanayo, iyakwazi ukuhlola nokugcina ngesikhathi senqubo yokusebenza.
Yenziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi engenasici engu-304 ehlukaniswe yadlula izikhathi ezi-3 ukukala kwengcindezi engu-2.5Mpa ukuqinisekisa ukusebenza.
Kuyinketho ongayikhetha yokubala kabusha ukwelashwa kwamanzi.
Kwakhiwe futhi kwenziwa nge-PVC ukwehlisa izinga lokushisa lamanzi okufafaza okuzogwema ukukala futhi ukugcwaliswa empeleni kukhulisa ukusebenza kahle kohlelo ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ngokusebenza okungcono kokudlulisa ukushisa.
Ama-cooler we-ICE afakwe ipompo ye-centrifugal ephawulwe ngemishini.
Umklamo we-slope (uthambekele ekubhekeni kokuphuma kokungcola) kanye ne-strainer yensimbi engagqwali kuzothuthukisa ukuchichima nokukhishwa kokungcola ngasikhathi sinye kususa ukungcola nokungcola esitsheni.
Langaphambilini Umdwebo Wokupholisa Okusalungiswa Okubonakalayo Ngokubukeka Konxande
Olandelayo: I-Counter-flow Circuit Cooling Towers / Ama-Coolers avaliwe wesifunda avaliwe
Amapharamitha wezobuchwepheshe we-Cross-flow Closed-circuit Cooling Tower
ukugeleza okuphambene kuvaliwe isifunda esipholile
Isiphambano Sokuvalwa Kwesifunda Esipholile Sokupholisa